I-China Yintoni imigaqo-siseko ye-washer wall? umzi-mveliso nabavelisi | I-REIDZ
Nguwuphi umgaqo wobugcisa we-washer wall?
Kule minyaka idlulileyo, i-washer ye-wall washer isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo, njengokukhanya kodonga kwenkampani kunye nezakhiwo zenkampani, ukukhanya kwesakhiwo sikarhulumente, isibane eludongeni lwezakhiwo zembali, iindawo zokuzonwabisa, njl .; Uluhlu olubandakanyekayo luyakhula ngokubanzi. Ukusuka kwindawo yangaphakathi ukuya ngaphandle, ukusuka kwisikhanyiso esisekuqalekeni ukuya kwisibane esikhoyo, kukuphuculwa kunye nophuhliso kwinqanaba. Njengoko ixesha lihamba, ii-washers zodonga ze-LED ziya kuphuhliswa zibe yinxalenye yeprojekthi yokukhanyisa.
1. Iiparameter ezisisiseko zamandla aphezulu e-wall washer
I-voltage yodonga lwendlu ye-LED ingahlulahlulwa ibe ngu: 220V, 110V, 36V, 24V, 12V, iindidi ngeendidi, ngoko sinikela ingqalelo kumthamo ohambelana xa ukhetha umbane.
1.2. Inqanaba lokhuseleko
Le yiparamitha ebalulekileyo yodonga lwasher, ikwayilo luphawu olubalulekileyo oluchaphazela umgangatho wechubhu lokugcina elikhoyo. Kufuneka senze iimfuno ezingqongqo. Xa siyisebenzisa ngaphandle, kungcono sifuna ukuba inqanaba lamanzi lingabi ngaphezulu kwe-IP65. Kuyadingeka ukuba ube noxinzelelo olufanelekileyo lokuxhathisa, ukuchasana kwe-chipping, ukunyuka okuphezulu kunye neqondo lokushisa eliphantsi, ukumelana nomlilo, ukungqubana nefuthe kunye nokuguga kwinqanaba le-IP65, i-6 kuthetha ukuthintela ngokupheleleyo uthuli ekungeneni; Iindlela ezi-5 zithetha: ukuhlamba ngamanzi ngaphandle kokonzakala.
1.3. ubushushu bokusebenza
Kuba ii-washer zodonga zihlala zisetyenziswa ngaphandle nangakumbi, le parameter ibaluleke ngakumbi, kwaye iimfuno zobushushu ziphakame kakhulu. Ngokubanzi, sifuna ubushushu bangaphandle kwi-40 ℃ + 60, enokusebenza. Kodwa le washer yodonga yenziwa ngeqokobhe lealuminiyam ngokutshabalalisa ubushushu obungcono, ke le mfuneko ingafezekiswa ngumasher udonga jikelele.
1.4 I-angle yokukhupha ukukhanya
I-angle yokukhupha ukukhanya ikhutshwa ngokuthe gca (malunga nama-20 degrees), aphakathi (malunga nama-50 degrees), kwaye ibanzi (malunga ne-120 degrees). Okwangoku, owona mgama uphumelelayo wokusebenza kwe-washer enamandla ekhokelela kumandla aphezulu (umtya omxinwa) ziimitha ezingama-20- 50
1.5. Inani lezibane zesibane ze-LED
Inani le-LEDs kwi-washer yodonga lwendalo yi-9 / 300mm, 18 / 600mm, 27 / 900mm, 36 / 1000mm, 36 / 1200mm.
1.6. Ukucaciswa kombala
Iziqingatha ezi-2, iziqendu ezi-6, iziqingatha ezi-4, iziqingatha ezi-8 zombala upheleleyo, umbala obomvu, tyheli, luhlaza, luhlaza, blowu, mhlophe neminye imibala
Ilensi yokubonakalisa iglasi, ukukhanya okuhanjiswa ngama-98-98%, akukho lula ukuba nenkungu, kunokumelana nemitha ye-UV
Kukho iindlela ezimbini zokulawula i-washer zodonga lwe-LED: ulawulo lwangaphakathi nolawulo lwangaphandle. Ulawulo lwangaphakathi luthetha ukuba akukho mlawuli wangaphandle ofunekayo. Umyili uyila inkqubo yokulawula kwisibane eseludongeni, kwaye umgangatho wokusebenza awunakutshintshwa. Ulawulo lwangaphandle lulawulo lwangaphandle, kwaye isiphumo salo sinokutshintshwa ngokulungelelanisa amaqhosha olawulo oluphambili. Ngokwesiqhelo kwiiprojekthi ezinkulu, abathengi banokutshintsha isiphumo kwizidingo zabo, kwaye sonke sisebenzisa izisombululo zolawulo lwangaphandle. Kukho ezininzi ii-washer zodonga ezixhasa ngokuthe ngqo iinkqubo zolawulo ze-DMX512.
1.9. umthombo wokukhanya
Ngokubanzi, ii-LED ezi-1W kunye nee-3W zisetyenziswa njengemithombo yokukhanya. Nangona kunjalo, ngenxa yetekhnoloji yokuvuthwa, ixhaphake kakhulu ukusebenzisa i-1W kwimarike okwangoku, kuba i-3W ivelisa isixa esikhulu sobushushu, kwaye ukukhanya kuhla ngokukhawuleza xa ubushushu bususwe. Ezi paramitha zingasentla kufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha i-washer ephezulu yamandla e-LED. Ukuze usasaze ukukhanya okukhutshwe yityhubhu ye-LED okwesibini ukuze kuncitshiswe ukulahleka kokukhanya kunye nokwenza ukukhanya kube ngcono, ityhubhu nganye ye-wall ye-wall washer iya kuba nelensi ephezulu yokusebenza kakuhle eyenziwe ngePMAMA.
2. Umgaqo osebenzayo we-washer wall
I-washer yodonga lwe-LED inkulu kakhulu ngobukhulu kwaye ingcono ngokwemibhobho yokufudumeza, ngenxa yoko ubunzima kuyilo buncitshisiwe kakhulu, kodwa kwizicelo ezisebenzayo, kuya kubonakala ukuba ukuqhuba okukhoyo ngoku akuhambi kakuhle, kwaye kukho ezininzi izinto ezonakala . Ke kanjani ukwenza udonga ukuba lusebenze ngcono, kugxilwe kulawulo kunye nokuqhuba, ukulawula nokuqhuba, emva koko siyakuthatha wonke umntu afunde.
2.1. Isixhobo se-LED esiqhubekayo ngoku
Xa kuziwa kwimveliso zamandla aphakamileyo ze-LED, sonke siya kukhankanya i drive yangoku eqhubayo. Yintoni i-LED eqhubayo ngoku? Nokuba ungakanani ubungakanani bomthwalo, isiphaluka esigcina oku kungoku kwe-LED rhoqo sibizwa ngokuba yiDS drive eqhubekayo ngoku. Ukuba i-1W ye-LED isetyenziswa eludongeni, kufuneka sisebenzise i-350MA ye-USB rhoqo drive yangoku. Injongo yokusebenzisa i-drive rhoqo ye-LED kukuphucula ubomi kunye nokufumana ukukhanya kwe-LED. Ukukhethwa komthombo okhoyo ngoku kusekwe ekusebenzeni kwawo nasekuzinzeni kwawo. Ndizama ukukhetha umthombo okhoyo opheleleyo ngokusebenza okuphezulu ngokusemandleni, okunokunciphisa ukulahleka kwamandla kunye neqondo lokushisa.
2.2. Ukusetyenziswa kwengcibi yedonga ekhokelayo
Iziganeko eziphambili zesicelo kunye nefuthe elinokufikelelwa lwasher yedonga ye-washer yodonga ilawulwa yi-microchip eyakhelweyo. Kwizicelo ezincinci zobunjineli, inokusetyenziswa ngaphandle komlawuli, kwaye inokufezekisa utshintsho ngokuthe ngcembe, gxuma, umbala wombala, ukukhanya kwethambeka, kunye notshintsho oluhamba kancinci. Iziphumo ezinamandla ezinje ngokutshintsha kunokulawulwa yi-DMX ukufezekisa iziphumo ezinje ngokujaja nokuskena.
2.3. Indawo yokwenza isicelo
Isicelo: Isakhiwo esinye, ukukhanya kwodonga olungaphandle kwezakhiwo zembali. Kwisakhiwo, ukukhanya kuhanjiswa ngaphandle nangaphandle kwekhaya. Ukukhanya komhlaba okuluhlaza, ukukhanya kwe-LED washer kunye nokukhanyiswa kwebhodi. Ukukhanya okukhethekileyo kwamaziko onyango kunye nawenkcubeko. Isibane se-Atmosphere kwiindawo zokuzonwabisa ezinje ngebar, iiholo zomdaniso, njl njl.